I-Deep Hole Gun ibhola Abakhiqizi | I-China Deep Hole Gun ibhola ifektri & Abahlinzeki
Kungeniswe isibhamu kancane nethuluzi lenduku ye-tungsten carbide gundr ...
Isitolo esidayisa yonke impahla CNC Deep hole hole Indexable gundrill Drill Bit
Three ukuxhumanisa ezijulile imbobo imishini umshini
I-Combinde BTA nomshini wokubhola izibhamu
Isibhamu sokugaya isibhamu
Izibhamu ze-gun ne-BTA
Umshini we-BTA Deep Hole Boring and Drilling
Three Axis Gun imishini umshini
Umshini We-Gun Drilling
Ithunyelwe isibhamu bit nethuluzi induku tungsten carbide gundrill ithuluzi
Ama-gun drills angama-drill aqondile avumela ukusika uketshezi ukuthi kujovwe ngomzimba oyize we-drill ebusweni obusikiwe. Zisetshenziselwa ukubhola okujulile-isilinganiso sokujula kuya kububanzi esingu-300: 1 noma ngaphezulu kungenzeka. Imigqomo yezibhamu iyisibonelo esisobala; yingakho igama. Okunye ukusetshenziswa kufaka phakathi ukwenziwa kwesikhunta, ukwenza idayimani, kanye nokwenziwa kwezinsimbi zomculo zokhuni, njengamapayipi e-uilleann, njengoba izivivinyo zezibhamu zingabhoboza izimbobo ezinde eziqondile zensimbi, ukhuni, namanye amapulasitiki. Isipholisi sinikeza ukuthambisa kanye nokupholisa emaphethelweni okusika futhi kususa ishubhu noma ama-chip emgodini. Izibhamu zanamuhla zezibhamu zisebenzisa amathiphu e-carbide ukwelula impilo nokunciphisa izindleko eziphelele uma kuqhathaniswa nezeluleko zensimbi.
ukusetshenziswa kwe-gun drill ezimbonini zokusika izinsimbi kufaka phakathi ezemoto, izindiza kanye ne-aerospace, ukwakhiwa, ezokwelapha, isikhunta nethuluzi nokufa, ama-hydraulic, i-pneumatics, nokuningi.
I-Gun drill iyithuluzi lokusika elikhethekile elisetshenziswa kumshini wokubhola isibhamu. I-Drillstar 's brilled single flute gun drill inezici ezilandelayo: Ububanzi bebubanzi: 3 - 40mm Ubude obuphelele: 5000mm (maximum) Uhlobo olulodwa olunemicibisholo luhlobo oluvame kakhulu. Futhi esetshenziswa kakhulu. Iqukethe ucezu olulodwa lwe-carbide drill bit kanye ne-steel drill bit ngokufaka i-carbide. Ishubhu ne-shank zenziwe ngezinto zensimbi. Futhi ngokwelashwa kokushisa. Izingxenye ezintathu zifakwe ithuluzi eliphelele. UDrillstar uthengisa isibhamu ...
Izinkomba zezibhamu ezi-Indexable Lezi zinsimbi zenziwa kunoma yibuphi ububanzi kusuka ku-11.52mm kuye ku-50mm. Osayizi bokufaka abangu-5 kuphela abemboza lonke uhla. Ukufakwa kulunge ngqo futhi akudingi ukulungiswa ukuze kukhiqizwe osayizi bama-bores. Ama-drill asebenzisa okugoqiwe kumaphayiphu womhlahlandlela Amapayipi ahlanganisiwe nawo ayatholakala. IZINZUZO Ukwahlukahluka kokusetshenziswa ku-lathe, ezikhungweni zemishini nemishini yemigodi ejulile. Ukusebenza kahle okuphezulu ngokwenziwe ngokukhethekile kwe-geometry enqenqemeni yokwakheka kwe-diea chip Kunciphisa isikhathi sokuphumula esivela ekushintshaneni okusheshayo kwe ...
Incazelo Yomkhiqizo Umshini wokucija isibhamu ojwayelekile we-GD-600 usebenzise i-track rolling roll ngokunemba, isivinini esikhulu semoto. Ukunyakaza kubushelelezi futhi ukungqubuzana kuncane. I-Grinder ingazungeza endizeni enezingqimba nezime mpo. Kusetshenziswa kabanzi kumathuluzi omshini anokulola i-Fixture kungaba okunembile futhi okusebenzayo ukugaya izinhlobo ezahlukahlukene zesibhamu.
ISolid Carbide Gun Drill DIAMETERS KUSUKELA .0393 ″ (1.0 MM) KUYA KU .4375 ″ (11.1 MM) UBUDE BOKUSIKWA KUSUKA KU-5 ″ (127 MM) - 14.17 ″ (360MM) Ama-Solid Carbide drill akhiqizwa njengesiqephu esisodwa se-carbide. I-tip kanye ne-tube ngumkhiqizo owodwa oqeda isiqeshana se-braze ekhanda noshintsho lwethubhu. Ngaleyo ndlela kuholele ithuluzi elinamandla ngokwedlulele, eligobile. Iningi lamasentimitha amancane wokuzivivinya azuza kakhulu ekuqiniseni okuqinile kwe-carbide ngoba akhipha inani eliphakeme lokuvumela ...
I-Gun Drill bush kanye nomhlahlandlela
I-Chip Box Flexible plastic bushings yelula phezu kwethiphu ye-carbide gun drill kanye nenkontileka ngaphezulu kwensimbi yensimbi ukumisa ukubhaxabula nokudlidliza. Imbobo Contoured ngamafomu uphawu ephelele on isibhamu sokuprakthiza.
Amathuluzi we-Step and Pilot angafakwa esicelweni sokuqeda imisebenzi emibili noma emithathu elandelayo emgodini owodwa. Ukusetshenziswa kwethuluzi lesinyathelo kunciphisa ngokumangazayo isikhathi somjikelezo, islahla, nokuqina phakathi kobubanzi. ISINYATHELO GUNDRILLS Izinyathelo zokuzivivinya zinemikhawulo yokukhiqiza kuye ngobubanzi obukhulu bezinyathelo ezinyathelweni. Ukuthuthuka okukhethekile kwe-carbide kwesinye isikhathi kungadingeka ngenxa yendawo yomgodi opholile. Ngokwengeziwe, ama-chip breakers angadingeka ngenxa yokushoda kwe-angle yangaphakathi wh ...
Izizathu eziyinkinga Ukuphakama kweHole kubi kakhulu. Umsebenzi wokusebenzela awubekiwe noma awulungisiwe kahle. Umhlahlandlela we-Drill awufanelekile, isikhala esikhulu phakathi komhlahlandlela we-drill kanye ne-gun drill 、 Akukho ukusekelwa okuhle kwe-shank drill shank. Isakhiwo sokwenza umsebenzi asisihle, njengosayizi wensimbi yokusebenza sikhulu kakhulu, futhi inkinga yezinto ezibonakalayo njengokuthile ngisho. Isigaxa se-Hole sibi kakhulu isivinini sokujikelezisa esiyinhloko, isilinganiso sokudla sihamba kancane. Ukusika uwoyela akulungile; Ingcindezi iphansi, i-fow low, izinga lokushisa likawoyela nalo ...